Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 5 - Blockchain News
Zibandakanye ngorhwebo imajini
urhwebo ezihlelelekileyo yenye inzuzo, kodwa kwangaxeshanye neendlela ezininzi yingozi abarhwebi crypto. Esi sicwangciso efanelekileyo kuphela ukuba abadlali abaqeqeshelweyo nabanamava Abaxhobele esingasingisi ilahleko enkulu yemali.
Ngorhwebo imajini, a cryptotrader kuthatha mboleko evela kumthengisi, e obuso exchange isikakhulu mboleko, ngokubonelela imali ngummeli wowona – uSt. Ngaxeshanye, inzala eso abekwa ityala ngenxa usebenzisa mboleko. Ngaloo ndlela, a cryptotrader nga ityale imali cryptocurrency ezingaphezu esikalini.
Kukho ezahlukeneyo ezimbini eziphambili borhwebo imajini: ke isikhundla elide, okanye umdlalo lokukhulisa, xa umrhwebi ubeka into yokuba asethi crypto kuya ikhula ixabiso, kwaye isikhundla elifutshane, okanye umdlalo ukuba ukuwa, xa izinga iya yokuba ixabiso cryptocurrency iza kuncipha. kunjalo, Ukuba ixabiso asethi crypto uya phantsi ngoxa ukuthengisela ukunyuka, ke xa ifikelela ingongoma ethile ebalulekileyo, umrhwebi bafelwe zonke yesibambiso ngenxa call imajini – wokuvala olunyanzeliswe umthengisi wo yingisela, ukuba umrhwebi sele na imali ifakwe kwi-akhawunti. Ukuba imali ebolekiweyo ziphantsi kwesoyikiso, exchange unelungelo lokutsala ilahleko evela imali-akhawunti imajini umrhwebi ngayo.
Kukho iimeko xa abarhwebi, ngubani okokuqala kwafuneka nazo iilahleko ezinkulu, isigqibo ukunyusa iirhafu ze uphumelele emva kwizikhundla zabo kunokuba ukwamkela ilahleko. Yeyiphi kubangela ilahleko ezingakumbi.
Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 4 Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 1
Bitcoin ngoMay ...
Ford iifayile cryptocurrency patent
Le ngxilimbela ngomatshini ...
Post Previous:Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 4
Post Next:iziko elitsha e Quebec iqala imisebenzi yemigodi Bitcoin
UCanzibe 21, 2018 e 2:22 AM
UCanzibe 29, 2018 e 2:15 AM
UCanzibe 30, 2018 e 6:11 PM
Isilimela 3, 2018 e 2:08 AM
Isilimela 4, 2018 e 8:29 PM